MOZIKA SY KOLONTSAINA :: Voasoratra anatin’ny lisitry ny vakoka iraisam-pirenena ny “Reggae” • AoRaha
MOZIKA SY KOLONTSAINA Voasoratra anatin’ny lisitry ny vakoka iraisam-pirenena ny “Reggae”
Tapaka nandritra ny fivoriana natao tany Maorisy, ny faran’ny herinandro teo, fa voasokajy ho isan’ireo vakoka ara-kolontsaina tsy azo tsapain-tanana ny gadona « Reggae ». Ny Sampandraharahan’ny Firenena Mikambana misahana ny vakoka sy ny kolontsaina, na ny Unesco no nanapaka izany.
Anisan’ny niombon-kevitra tamin’ny fametrahana izany gadona izany ao anatin’ireo vakoka ara-kolontsaina iraisam-pirenena ny anjara andraikitr’ity mozika avy any Jamaïque ity eo amin’ny fanentanana ara-pieritreretana iraisam-pirenena mahakasika indrindra ny tsy rariny, ny fanoherana, ny fitiavana sy ny maha olombelona. Toa izany kosa ny lafiny saina, ny pôlitika sy ny fiarahamonina ary ny ara-panahy.
Anisan’ireo loharano nipoiran’ny Reggae i Bob Marley, izay narahin’ireo mpanakanto hafa taty aoriany, toa an-dry Alpha Blondy. Tany Jamaïque no teraka ny Reggae, izay nipoitra avy amin’ny « Ska » sy ny « Rocksteady », tany amin’ny taona 60 tany. « Raha nitondra ny feon’ireo olona ivelan’ny fiaraha-monina tany am-piandohany ny reggae, efa miangaly azy amin’izao fotoana ny ankamaroan’ny mponina, ary tsy manavaka foko na finoana », araka ny fanazavan’ny Unesco.
Araka izany, manampy ireo kolontsaina nentin-drazana (hira, dihy, sakafo…) manodidina ny efajato ny reggae. Teo ambany fitarihin’ny Tale jeneralin’ny Unesco, Audrey Azoulay, no namoahan’ny komity ireo lisitra vaovao manampy indray ny vakoka ara-kolontsaina tsy azo-tsapain-tanana, ka antontan-taratasy manodidina ny efapolo no nodinihin’izy ireo tamin’izany, nanomboka ny 26 novambra lasa teo.
Tantara an-dampihazo Hilalao an-tsehatra ny « Fianakaviana adala » ny Antananarivo Teatra
Fitafy sy sakafo gasy
FIFANINANANA SARY :: Fabrice Rabariniriana no nandrombaka ny laharana voalohany